रुघा खोकी लाग्दैमा कोरोना भनेर नडराउनुस्, यसरी गर्नुस् घरमै उपचार पक्कै निको हुन्छ – Dainik Sangalo
रुघा खोकी लाग्दैमा कोरोना भनेर नडराउनुस्, यसरी गर्नुस् घरमै उपचार पक्कै निको हुन्छ
October 31, 2020 565
काठमाडौ । अहिले मौसम परिवर्तनको समय रहेको कारण धेरै मानिसहरु रुघा खोकी, टन्सील, ज्वरोबाट ग्रस्त हुने गरेका छन् । यस्तो समयमा स्वास्थ्यको ख्याल नगर्दा निकै दुख पाइन्छ भने अन्य समस्याहरु पनि थप हुँदै जान सक्छ । घाँटी खसखस हुने, नाक बन्द हुने, नाक चिलाउने, खोकी लाग्ने, रुघाबाट ग्र स्त हुने, टाउको दुख्ने र नाक बाट पानी वा सिंगान बगिरहने लगायतका समस्याहरु यस्तो बेलामा देखा पर्नु सामान्य नै हो ।
यी समस्याहरु देख्ने बित्तिकै उपचार गरेन भने सिकिस्त बिमारी भएर बेडमै थला परेर बस्नु पर्ने हुन्छ । बढ्दो चिसोको कारण हुने यी समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन समयमै औषधी उपचार गर्यौं भने यी समस्या त्यति जटिल या भ या न क भने होइन । सुरुमै रुघाखोकीको लक्षण देख्ने बित्तिकै यसको हेरचाह र घरायसी औपधिमा लाग्नु उत्तम हुन्छ । यसका लागि हामी केही घरायसी उपाय यहाँ प्रस्तुत गर्दै छौं ।
तुलसीको पात: तुलसीको पात कयौँ रोगहरुको लागि एक अचुक घरेलु औषधी हो। यसले मुटु रोग वा पेट सम्बन्धी बिमारीहरुलाई निको पार्नुका साथै यो रुघाखोकी, ज्वरोको लागि एकदम फाइदाजनक हुन्छ। यसको लागि एक गिलास पानीमा ५र६ ओटा तुलसीको पात राखेर मज्जाले उमाल्नुहोस्। उमालीसकेपछी मन तातो वा चिसो भएपछी यो पानी पिउनुहोस् । दिनभर २र३ पटक गरेर थोरै थोरै पिउनुहोस् । यसले रुघाखोकी, ज्वरो, घाँटी दुख्ने, नाकबाट सिंगान बग्ने जस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा दिलाउन मद्धत गर्छ।
मेथिदाना : मेथी दाना पनि अनेक गुण भएका एक घरेलु औषधी हो। यसले रुघा, खोकी, चिसो, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्याहरुलाई छिट्टै निको पार्छ। मेथी दानाको सेवनले शरीरमा चाँडो गर्मी हन्छ, जसको कारण यस्ता समस्याहरुबाट तुरुन्तै राहत मिल्छ । यसको लागि एक गिलास पानीमा एक सानो चम्चा मेथी दाना राखेर ५(१० मिनेटका लागि उमाल्ने। उमालीसकेपछी मन तातो बनाएर दिनमा २ पटक यो मेथी पानी सेवन गर्नुहोस्।
मरिच : मरीचमा एन्टीब्याक्टेरियल प्रोपर्टीज् पाइन्छ। जसले चिसो, रुघाखोकीको इ न्फे क्श नलाई एकदम तीब्र रुपमा निर्मुल पार्छ। यसको लागि एक चम्चा महमा एक चिम्टी मरिचको पाउडर मिसाएर दिनमा २र३ पटक सेवन गर्नुहोस्।
अंगुरको जुस : सुख्खा खोकी, घाँटी दुख्ने या रुघाखोकीबाट छुटकारा पाउन बिहान बेलुका अंगुरको जुस पिउनुहोस्। यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम लाभदायी हुनुका साथै रुघाखोकीलाई पनि तुरुन्तै निर्मुल पार्छ ।
अदुवा : घाँटी दुख्ने वा खोकी जस्ता समस्याहरुका लागि अदुवा एकदम लाभदायी चिज हो। यी समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि अदुवालाई ग्रेट गर्ने। त्यसपछी एक गिलास पानीमा एक चम्चा ग्रेट गरेको अदुवा राखेर उमाल्ने । यसरी उमालीसकेपछी मन तातो बनाएर पिउनुहोस्। दिनमा २ पटक यसरी उमालेको अदुवा पानी सेवन गर्नुहोस्।
बेसार : आयुर्वेदमा बेसारलाई शरीरको शुद्धिकरणको लागि पुर्खौं देखि प्रयोग गरिंदै आएको एक अचुक औषधी हो। बेसारले जस्तो सुकै ज्वरो वा जिउ दुख्ने रोगलाई निको पार्छ। रुघाखोकीबाट तुरुन्तै राहत पाउन बिहान बेलुका एक गिलास तातो पानीमा एक या आधा चम्चा बेसार पाउडर मिसाएर पिउनुहोस्। अथवा एक गिलास तातो दुधमा एक चम्चा बेसार पाउडर मिसाएर पिउनुहोस्।
Prevसियोना श्रेष्ठको लागि एती धेरै रकम सयोग गरे इशा गुरुङग ले।
Nextयस वर्ष तिहारमा भारतबाट फूल नआउने
‘रअ प्रमुखलाई भेटेपछि नक्साबाट लिम्पियाधुरा गायब……… ?’
अकबरे खुर्सानीबाट ईलामका मदनलाई बनायो करोडपति, यसरी जोडे डेढ करोडको सम्पत्ति
अन्तत : संसद पुनर्स्थापना नै सर्बोच्चको आन्तिम निर्णय
विश्वभर एकैदिन २ लाख ३९ हजार संक्रमित थपिए, ५ हजार ८२७ को मृत्यु
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (68982)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64075)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54867)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (49913)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (43678)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43533)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (41796)